Why I Chose to Attend My Master Degree at SIT (ကျွန်တော် ဘာ့ကြောင့် SIT မှာ ကျောင်းတက်ဖို့…
Why I Chose to Attend My Master Degree at SIT (ကျွန်တော် ဘာ့ကြောင့် SIT မှာ ကျောင်းတက်ဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့သလဲ
Values of SIT Graduate Institute
အမေရိကန်နုိုင်ငံမှာ ကျောင်းတက်ဖုို့ ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာ SIT Graduade Institute ကျောင်းတစ်ခုထဲကုိုပဲ ကျွန်တော် ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ တခြားသူတွေနဲ့ တွေ့တဲ့အခါ၊ မိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာ များသောအားဖြင့် SIT (School for International Training) ကုို မသိကြပါဘူး။ ဘာဖြစ်လုို့လဲဆုိုတော့ အရမ်းကုို နာမည်ကြီးတဲ့ လူတုိုင်းနီးပါးတက်ချင်တဲ့ Harvard တုို့ Yale တုို့ စတဲ့ တက္ကသုိုလ်တွေလုို မဟုတ်လုို့ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ SIT ဟာ နုိုင်ငံပေါင်း မြောက်များစွာက ခေါင်းဆောင်တွေ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ အများအပြားကုို နှစ်ပေါင်း (၄၀) ကျော်ကြာ မွေးထုတ်ပေးနေတဲ့ reputation အရမ်းကောင်းတဲ့ တက္ကသိုလ် တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ကျောင်းသားဟောင်းကွန်ရက်က တော်တော်ကြီးပါတယ်။ ကွန်ဖရင့်တုို့ ဘာတုို့ သွားတက်ရင် SIT alumni တွေ မကြာခဏတွေ့ရတယ်လုို့ ပြောကြပါတယ်။ ပြီးတော့ သင်ကြားတဲ့ ဘာသာရပ်လဲ သိပ်မများတော့ ကျောင်းသားတွေရဲ့လုိုအပ်ချက်ကုို ထိရောက်ကောင်းမွန်စွာ ဖြည့်ဆည်းပေးနုိုင်တာကလဲ SIT ရဲ့ အားသာချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ SIT ကုိုရွေးချယ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ အများအပြားရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အောက်ပါ အချက်အလက်တွေကြောင့်လုို့ အဓိကပြောလုို့ရပါတယ်။
SIT နဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဆက်နွယ်မှု
ကျွန်တော် SIT နဲ့ စတင်ထိတွေ့ရတာက ဟုိုးလွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်က ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်စင်တာမှာ ကျွန်တော် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတွေ တက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ နုိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ World Learning ကနေပြီးတော့ အင်္ဂလိပ်စာဆရာဖြစ် သင်တန်းတစ်ခုကုို အမေရိကန်စင်တာမှာ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ QuiLT (Qualification in Language Teaching) လုို့ခေါ်ပါတယ်။ SIT ရဲ့ Certificate Course တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းကုို ကောင်းမွန်စွာ တက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တုို့အတွက် QuiLT ဟာ အရမ်းကုို ကောင်းမွန်ပြီး၊ ပုိုမုိုထိရောက်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ ဆရာကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် သင်ကြားမွေးထုတ်ပေးနုိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သင်ကြားပေးတဲ့ ဆရာကလဲ အရမ်းကောင်းတော့ အဲ့ဆရာတက်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းဆုိုရင် ဘယ်လောက်တောင် ကောင်းမလဲဆိုတာ စိတ်ထဲမှာ အမြဲ စဉ်းစားနေခဲ့မိတယ်။ QuiLT သင်တန်းတက်ပြီးတာနဲ့ အဲ့ဒီသင်တန်းကုို စီစဉ်တဲ့ ဆရာကပဲ အခြား ဆရာနှစ်ယောက်နဲ့ ပေါင်းပြီး ဖွင့်တဲ့ Training of Trainers (TOT) သင်တန်းကုို ကံကောင်းစွာပဲ ထပ်မံတက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ဒီသင်တန်းနှစ်ခုဟာ ကျွန်တော့်ဘ၀ကုို Personally ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကော Professionally အရပါ ပြောင်းလဲပေးခဲ့တဲ့ သင်တန်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ TOT ရဲ့ သင်တန်းဆရာ (၃) ယောက်ထဲက (၂) ယောက်ဟာ SIT မှာ မဟာဘွဲ့ ရခဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီသင်တန်းနှစ်ခုကုို တက်ပြီးကတည်းက ကျွန်တော့်ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ တစ်နေ့နေ့ကျရင် ငါလဲ SIT မှာ မဟာတန်း တက်နုိုင်ရမယ်လုို့ မသိစိတ်ရော၊ သိစိတ်ထဲမှာပါ အမြဲ ကိန်းအောင်းနေခဲ့ပါတယ်။
World Learning မိသားစု
World Learning ဟာ နုိုင်ငံပေါင်း (၆၀) ကျော်မှာ ပညာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး နဲ့ ဖလှယ်ရေးဆုိုင်ရာ အလုပ်တွေ၊ အစီအစဉ်တွေကို နှစ်ပေါင်း (၈၀) ကျော် လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့၊ လုပ်ဆောင်နေဆဲ နုိုင်ငံတကာ အစုိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ SIT Graduate Institute က World Learning ရဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Campus က ဗားမောင့်ပြည်နယ်၊ ဘရက်တယ်ဘုိုရုိုမြို့ နဲ့ ၀ါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်မှာ တည်ရှိပါတယ်။
မြန်မာနုိုင်ငံ၊ အမေရိကန်စင်တာမှာ အခြေစုိုက်တဲ့ အုိုင်ပေ့စ် (iPACE — Institute for Political and Civic Engagement) သင်တန်းကျောင်း နဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်းကျောင်း English Language Program ဟာလဲ World Learning ရဲ့ အစီအစဉ်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အိုင်ပေ့စ် စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့အချိန် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ကျွန်တော် သင်တန်းဆရာ တစ်ယောက်အနေနဲ့ သင်တန်းအပတစ်စဉ် (၂) ခုမှာ စတင် အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးမှ Advocacy and Training Advisor အဖြစ် အချိန်ပြည့် (၂) နှစ်လောက် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်တော် SIT မှာ ကျောင်းလာမတက်ခင်အထိ Associate Director အဖြစ် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ဟာ World Learning ရဲ့ မိသားစုဝင်တစ်ယောက်အဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကုို အမြဲ ခံစားရပါတယ်။
ဘာ့ကြောင့် SIT လဲ
တခြား တက္ကသုိုလ်တွေအများကြီး ရှိရဲ့သားနဲ့ ဘာကြောင့် SIT ကုို ရွေးချယ်ရသလဲဆုိုတာ မေးချင်စရာ မေးခွန်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလုိုပဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ သင်တန်းဆရာတွေလုို ပုိုမုိုကောင်းမွန်တဲ့ သင်တန်းဆရာ တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖုို့၊ ပြီးတော့ World Learning ရဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်လုို့ လုို့ ပြောလုို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပုိုပြီး အရေးကြီးတာက SIT ရဲ့ တန်ဖုိုးထားမှု (values)၊ သူ့ရဲ့ သင်ကြားပုံ သင်ကြားနည်း နဲ့ သူ့ ရဲ့ အထူးပြုဘာသာရပ်တွေကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆုို SIT က ဘာကုိုတန်ဖုိုးထားသလဲ။ SIT ရဲ့ အဓိက တန်ဖိုးထားမှု values က (၇) ခုရှိပါတယ်။ ဘာတွေလဲဆုိုတော့ — Inclusion, Experiential Education, Engaged Learning, Community, Reciprocity, Social Justice and Sustainability တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော် အတတ်နုိုင်ဆုံး အတုိုချုံးကြည့်ပါမယ်။
ပထမ တန်ဖုိုးထားမှုကတော့ Inclusion လုို့ခေါ်တဲ့ အားလုံးအကျုံးဝင်ပါဝင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ SIT က မတူကွဲပြားမှုတွေအားလုံးကုို ပါဝင်နုိုင်အောင် ကြိုးစားပါတယ်။ မတူကွဲပြားမှုဆုိုရာမှာ လူမျိုး၊ တုိုင်းရင်းသား၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာစကား၊ နုိုင်ငံသား၊ အသက်အရွယ်၊ ကျားမ၊ စွမ်းဆောင်ရည်၊ ဘာသာရေး ဆုိုင်ရာ ကျင့်ကြံအားထုတ်မှု၊ ဆင်းရဲချမ်းသာ၊ နုိုင်ငံရေး အစရှိသဖြင့် မတူကွဲပြားမှုအားလုံးပါဝင်ပါတယ်။ သူတုို့ရဲ့ အစီအစဉ်တွေကုို ဒီဇုိုင်းဆွဲပြီး စီမံခန့်ခွဲရာမှာ အားလုံးပါဝင်ရေးကုို အဓိကထား စဉ်းစားပါတယ်။ သင်ရုိုးတွေမှာလဲ မတူညီတဲ့အတွေးအခေါ်၊ သဘောထားအမြင်တွေကုို ထည့်သွင်းပြီး ကျောင်းသားတွေကုို ပုိုမုိုကောင်းမွန်တဲ့ သင်ယူမှု အတွေ့အကြုံတွေကုို ပေးဆောင်နုိုင်ဖုို့ ကြိုးစားပါတယ်။ ဒါဟာ Intercultural learning အတွက် အဓိက အစိတ်အပုိုင်းတစ်ခု အဖြစ် သူတုို့ က ခံယူထားပါတယ်။
ဒုတိယတန်ဖုိုးထားမှုကတော့ Experiential Education ဖြစ်ပါတယ်။ အတွေ့အကြုံကနေ သင်ယူခြင်းဆုိုတဲ့ သီအုိုရီကုို အမြဲလက်ကုိုင်ထားပြီး သီအုိုရီနဲ့ လက်တွေ့ကုို အမြဲဒွန်တွဲပြီး သင်ကြားပါတယ်။ ဒါကြောင့်မုို့ သူ့ရဲ့ မဟာဘွဲ့ရဖုို့ ဆုိုရင် ကျောင်းမှာ စာသင်ရတာ (၉) လလောက်သာ ကြာမြင့်ပြီး လက်တွေ့ အလုပ်လုပ်တာ၊ Internship/Practicum ဆင်းရတာ အနည်းဆုံး (၆) လ ကြာမြင့်ပါတယ်။ သင်ကြားတဲ့ ဘာသာရပ်အားလုံးဟာ အတွေ့အကြုံကုို အဓိကအခြေခံထားပြီး သင်ကြားတဲ့အတွက် ကျောင်းသားတွေရဲ့ သင်ယူမှုကုို အထောက်အကူ ဖြစ်စေပြီး တကယ်လဲ တတ်မြောက်စေပါတယ်။
Engaged Learning ကတော့ ကျောင်းသားတွေ တက်ကြွလှုပ်ရှားစွာ လေ့လာသင်ယူနုိုင်ဖုို့ တုိုက်တွန်းအားပေးပါတယ်။ ဆွေးနွေးတာ၊ တုိုင်ပင်တာ၊ အဖွဲ့လုိုက် ပရောဂျက်တွေလုပ်တာ စသဖြင့် အမြဲ active ဖြစ်နေအောင် သင်ယူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကုို ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ သင်တန်းသားတွေက သူတုို့ရဲ့ သင်ယူမှုအတွက် တာဝန်ယူရပါတယ်။ သူတုို့ ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်၊ ရည်မှန်းချက်ပန်းတုိုင်တွေကုို ကုိုယ်ကုိုယ်တုိုင် ချမှတ်ပြီးတော့ ရောက်အောင်သွားဖုို့ တာဝန်ယူရပါတယ်။ Engaged Learning က တာဝန်ယူစိတ်ကုို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးပါတယ်။
SIT ရဲ့ အခြား အဓိကကျတဲ့ တန်ဖုိုးကတော့ Community ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ SIT နဲ့ သူ့ရဲ့ Experiment အစီအစဉ်တွေက ကျောင်းသားတွေကုို ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေဆီကနေ သာမက နုိုင်ငံတကာမှာ သူတုို့ သွားရောက်ပြီးတော့ ပညာသင်ယူနေတဲ့နေရာတွေမှာရှိတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ မိသားစုတွေနဲ့ အတူနေထုိုင်ပြီး သူတုို့ရဲ့ ရုိုးရာယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့တွေကုို လေ့လာခွင့်ရအောင် ဖန်တီးပေးပါတယ်။ SIT ရဲ့ campus မှာလဲ ကျောင်းသားတွေအားလုံးကုို မိသားစုဝင်တွေလုို ခံစားရအောင် sense of community ရအောင် ဖန်တီးပေးပါတယ်။ နုိုင်ငံတကာကျောင်းသားတွေနဲ့ အမေရိကန်ကျောင်းသားတွေကြားထဲမှာလဲ ရင်းနှီးမှု၊ နွေးထွေးမှုဖြစ်အောင် ကျောင်းသားမိတ်ဆက်ပွဲ Orentation ကအစ လုိုလေသေးမရှိအောင် ကောင်းမွန်စွာ စီစဉ်ပေးပါတယ်။
Reciprocity ကတော့ ပြန်လည်မျှဝေလိုခြင်းလုို့ အဓိပ္ဗါယ်ဖွင့်လုို့ ရမယ်ထင်ပါတယ်။ ပြန်လည်မျှဝေလုိုစိတ်ရှိခြင်းဟာ အပြန်အလှန်လေးစားခြင်း၊ အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ဖုို့ ဆက်ဆံရေး သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ SIT မှာ ကျောင်းတက်ပြီး ပြန်သွားတဲ့သူတွေဟာ များသောအားဖြင့် သူတို့ရဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်း community မှာ ပြန်လည်ပြီးတော့ မျှဝေပေးနေတဲ့သူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
Social Justice လုို့ခေါ်တဲ့ လူမှုရေးဆုိုင်ရာတရားမျှတမှုကတော့ SIT ရဲ့ အဓိကမဏ္ဍိုင်တစ်ခုလုို့ ပြောလုို့ရပါတယ်။ လူမှုရေးဆုိုင်ရာ တရားမျှတမှုဟာ လူ့အသုိုင်းအ၀ုိုင်းတစ်ခုမှာ အရင်းအမြစ်ကုို မျှတစွာခွဲဝေခြင်း၊ တူညီတဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ ဖန်တီးပေးခြင်းတုို့ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီတန်းတူညီမျှမှုကုို ရရှိဖုို့ လုပ်ဆောင်ရာမှာ ဒီမုိုကရေစီဆန်ဖုို့နဲ့ အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်နုိုင်အောင် လုပ်ဆောင်နုိုင်ဖုို့ က အရေးကြီးပါတယ်။ လူမှုရေးဆုိုင်ရာ တရားမျှတမှုက SIT ရဲ့ သင်ရုိုးညွန်းတမ်းနဲ့ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုတွေမှာ အဓိကအစိတ်အပုိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ပါဝင်နေတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ SIT အစီအစဉ်တွေဟာ တခြားသူတွေနဲ့ ပုိုမုိုကျယ်ပြန့်တဲ့ လူ့အသုိုင်းအ၀ုိုင်းအပေါ်မှာ လူမှုရေးဆုိုင်ရာ တာဝန်ယူမှုတွေ ထွန်းကားလာအောင် အမြဲကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ Sustainability စဉ်ဆက်မပြတ် (သို့မဟုတ်) ကြာရှည်ခံတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတုိုးတက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လူသားမျိုးနွယ်တွေ အတူတကွငြိမ်းချမ်းစွာ ရေရှည်ယှဉ်တွဲနေထုိုင်သွားနုိုင်ဖုို့ ဆုိုရင် ကျွန်တော်တုို့ရဲ့ အရင်းအမြစ်တွေကုို မျှတစွာ ဘယ်လုို အသုံးပြုမလဲ၊ ဘယ်လုို စီမံခန့်ခွဲမလဲဆုိုတာ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် SIT က ဒီဘာသာရပ်ကုို ထည့်သွင်းထားပြီး အထူးပြုထားပါတယ်။
ဒီ values တန်ဖုိုးထားမှုတွေကြောင့် SIT ကုို ကျွန်တော် ရွေးချယ်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် Sustainable Development ကုို အထူးပြုလေ့လာနေပြီး Training သင်တန်းပိုင်းကို အထူးပြုဘာသာအဖြစ် ယူထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အပေါ်က ပြောခဲ့သလုိုပဲ SIT မှာ အထူးပြု သင်ကြားပေးတဲ့ဘာသာရပ်တွေကလဲ အနည်းငယ်ပဲရှိတဲ့အတွက် ပုိုပြီးထိရောက်ပါတယ်။ သင်ကြားတဲ့ ဘာသာရပ်တွေကတော့ International Education, Peace Building and Conflict Transformation, Sustainable Development, TESOL, နဲ့ Intercultural Service, Leadership, and Management တုို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ TESOL အင်္ဂလိပ်စာဆရာဖြစ်သင်တန်းကတော့ တော်တော်နာမည်ကြီးပါတယ်။ ISLM ဘွဲ့ က ကုိုယ့်ရဲ့ ဘွဲ့ကုို ကုိုယ်ကုိုယ်တုိုင် ဒီဇုိုင်းလုပ်ယူရပါတယ်။ ဒါကလဲ ကျောင်းသားတွေရဲ့ လုိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ရေးဆွဲထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ ဒီစာကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်က ကျွန်တော် အမေရိကကို စရောက်တဲ့အချိန်က ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၈ မှာကျတော့ စိတ်မကောင်းစွာပဲ SIT က သူတို့ရဲ့ အချိန်ပြည့် တက်ရတဲ့ မာစတာဘွဲ့ အစီအစဉ်တွေကို ဖျက်သိမ်းပြီးတော့ အခုဆိုရင် အွန်လိုင်းတစ်ဝက်၊ on campus တစ်ဝက်တက်ရတဲ့ Global Master Degrees တွေပဲ ရှိပါတော့တယ်။ စိတ်ဝင်စားတယ်၊ တက်ချင်တယ် ဆုိုရင်ဖြင့် SIT ရဲ့ ၀က်ဘ်ဆုိုဒ်ကုို ဒီနေရာမှာ ၀င်ရောက်လေ့လာနုိုင်ပါတယ်။ http://graduate.sit.edu/
Professional trainer with more than5years of experience empowering political and civil society activists through training and non-profit management.
Never missastory from Sai Aung Thein, when you sign up for Medium. Learn more
Never missastory from Sai Aung Thein